Al-Shabaab oo xoolaha ka dhacaysa shacabka Jubada Dhaxe ee abaartu ku dhufatay. - Wargeyska Faafiye
Home 2014 October 9 .Warka Al-Shabaab oo xoolaha ka dhacaysa shacabka Jubada Dhaxe ee abaartu ku dhufatay.
Al-Shabaab oo xoolaha ka dhacaysa shacabka Jubada Dhaxe ee abaartu ku dhufatay.
October 9, 2014 · by	Liban Farah ·
Al-Shabaab ayaa ku amraysa shacabka daggan gobalka Jubbada Dhaxe in ay xoolahooda kabadbaaday abaarta ay soo ururiyaan ayna ku soo wareejiyaan kooxdan maleeshiyaadka ah, madaxda Maamulka Ku meelgaadhka ah ee Jubba (IJA) iyo shacabka ayaa sheegay.
Al-Shabaab, oo wali ka talisa inta badan gobalka Jubbada Dhaxe, ayaa bialwday in ay in ay ka ururiso geela, lo’da iyo ariga magalooyinka Bu’aale, Jilib, Saakow iyo tuulooyinka ku hareeraysan, sida uu sheegay Kornayl Curdan Kilas Gurase oo ka tirsan ciidanka amaanka ee IJA.
“Al-Shabaab ayaa inta badan beegsata geela, kaas oo ah xoolaha ay Soomaalidu inta badan haysato midka ugu muhiimsan,” ayuu u sheegay Sabahi. “Dadka ay dhacayaan ayaa inta badan xoolahooda ku wayaay abaarta, kooxdan [xagjirka ahna] waxay qooys walba ka qaadanayaan xoolihii yaraa ee u soo hadhay.”
Gurase ayaa sheegay in maamulku uu maalin walba cabshooyin soo gaadhayaan kuwaas oo ka imaanaya dad qaraabo ah oo ay ehelkoodii wali ku danbeeyaan meelaha ay al-Shabaab wali ka taliso.
“Maamul ahaan waxaan isla hadaba qorshaynaynaa in aan xorayno dadka ay abaartu ku dhifatay ee ay al al-Shabaab sid khasabka ah mar walba xoolahooda ku dhacdo,” ayuu yidhi, isaga oo intaas ku daray in hawlgallada al-Shabaab lagaga nadiifinayo gobalka Jubbada Dhaxe ay qaadan karto wax hal bil ka yar.
Maxamed Cabdi oo 50 jir ah oo ka tirsan duqayda Jilib oo diiday in uu sheego magaciisa saxda ah sababo ammaan darteed, ayaa u sheegay Sabahi in al-Shabaab ay dhawaan shan neef oo geel ah ay ka xadday walaalkiis oo dhimirka la’ kaas oo ku nool tuulada Nasriya ee ku taala gobalka Jubbada Dhaxe.
“Wuxuu hadda ka hor lahaa wax ka badan konton neef oo geel ah, laakiinse walaalkay xoolihiisii way baaba’een sabab la xidhiidha abaarta gobalka ku dhufatay,” ayuu yidhi. “Al-Shabaab ayaa si xoog ah ku qaadatay shantii neef ee ugu danbaysay kadib markii uu diiday in uu oggolaado dalabkoodii ahaa in uu bixiyo laba neef oo geel ah.”
Cabdi ayaa sheegay in uu cunto u dirayay walaalkiis uuna la xidhiidhay dad qaraabo ah oo dibadda ku nool, isaga oo waydiisanaya in ay lacag u soo ururiyaan si walaalkiis iyo caruurtiisa todobada ah ay uga soo raraaan tuulada ayna u keenaan magaalada Jilib.
“Culays wayn oo aan qaadi karin ayaa i fuulay, laakiinse waxaan door bidayaa in waxa yar ee aan haysto aan walaalkay iyo caruurtiisa la wadaago intii ay kaligood dhiman lahaayeen,” ayuu yidhi.
Qalloocinta Islaamka si marmarsiinyo loogu helo dhaca
Cumar Faarax oo 42 jir ah kana tirsan duqayda ku nool tuula Wel Shimbir ee u dhaw magalaada Bu’aale, ayaa sheegay in ay haysato xaalad aad u xun kadib markii al-Shabaab ay si xoog ah kaga qaadatay 15 neef oo adhi ah iyo 10 geel ah.
“Markii qofka ay abaartu aadka u saamaysay laga dhaco wixii yaraa ee u soo hadhay, waxaan dhihi karaa ficilkaasi waa mid aad uga fog [mabaadii’da] Islaamka,” ayuu Faarax u sheegay Sabahi.” Laakiinse raggaas al-Shabaab ah marka horaba wax diin ah oo ay haytaan ma jirto.”
“Wax cudur daar ah oo ay noo sheegeen ma jirto si ay xoolahaanaga u qaataan,” ayuu yidhi. “Waxay noo sheegeen in ‘xoolahani ay yihiin kuwo zako looga qaadayo oo ay ahayd in ay mar hore bixiyaan, oo ay hadda ururinayaan'”.
Faarax ayaa sheegay in al-Shabaab ay haysato dhibaato dhaqaale oo aad u daran si alla sidii ay dagaal yahaniinteeda ku quudinaysana ay samaynayso, oo ah in shacabka ay dhacaan.
“Waxa ay al-Shabaab samaysay ma aha kaliya in ay sharci daro tahay ee waa wax danbi ah,” ayuu yidhi, isaga oo intaas ku daray in maleeshiyaadku ay ogyihiin in aan waxba loo soo raacanaynin sababta oo ah shacabku ma hubaysna si sahal ahna waa looga adkaan karaa.
Kadib markii laga dhaco xoolahoodii u soo hadhay — oo ah rajadoodii ugu danbaysay ee ay qoysaskoodu lahaayeen abaarta kadib — ayaa shacabku dareemayaa in ay tabar dhigeen, ayaa sheegay Faarax. “Hadda al-Shabaab kama cabsanayno sababta oo ah qofka nolol u hadhay ma jirto markii xoolihiisii oo dhan laga qaato.”
Faarax ayaa ka codsaday ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Ergada Midawga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) in ay al-Shabaab ka xoreeyaan meelaha ay gacanta ku hayso ee Jubada Dhaxe.
“Tacaddiga ay dadka ku hayaan lama xamili karo,” ayuu yidhi. “Anaga oo ah oday dhaqameedyada gobalka Jubada Dhaxe, waxaan dhihi karnaa wax noo hadhay ma jirto oo aan ka ahayn in ay al-Shabaab na disho.”
Sheekh Axmed Daahir, oo ah sheekh ku nool degmada Xamarwayne ee Muqdisho, ayaa sheegay in Islaamku uu xaaraantimeeyay xadgudubka ayna sharci daro tahay in qof uu dhaco qofka kale xoolahiisa.
“Culimada Soomaaliya ayaa in badan ka hadashay ficilada xun ee al-Shabaab ee ah dhicitaanka dadka xoolahiisa,” ayuu u sheegay Sabahi. “Islaamku wuxuu xaaraantimeeyay in la dhaco qof kale xoolihiisa qofkaasi ha ahaado Muslim ama yuusan ahaanin. [Ficillada] al-Shabaab wax asal ah kuma laha Islaamka.”
3 lagu dilay toogasho ka dhacday Colorado.
DHAGEEYSO: Warbixin: Xiriirka Xasan Kheyre iyo Soma Oil.
Faafiye Show: Iska Hor imaadka Madaxweeynaha iyo R/Wasaaraha .
Qiimaha qaadka oo ka raqiisay Nairobi
Hargeysa: Dhaawaca gudoomiyaha maxkamada.